ढोरपाटनमा ‘हाइ अल्टिच्युट’ खेल मैदान बन्ला ?::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ ,२९ बैशाख – ढोरपाटनमा बनाउने भनिएको ‘हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’को काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ढोरपाटनमा बनाउन गरेको तयारी गरेपनि कानूनी अप्ठ्यारोले काम रोकिएको हो ।
वन मन्त्रालयको अनुमति दिएपनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको भावना विपरित भन्दै आरक्षले अनुमति नदिएपछि काम रोकिएको बताइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा बन्यजन्तु संरक्षण गरिएको स्थानमा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भन्ने बिषय उठाएर आरक्ष बिभागले अबरोध गरेको हो । मन्त्रालयले अनुमति दिएकोले सिकार आरक्षको अनुमति मात्र भए पुग्नेमा आरक्षका कर्मचारी उपल्लो निकाय देखाउँदा काम रोकिएको खेलकु“द बिकास समितिका अध्यक्ष धनबहादुर परियारले बताए । वन मन्त्रालयको अनुमति पाएपछि चालु बर्षका लागि राष्ट्रिय खेलकुँद परिषदले बजेट समेत बिनियोजन गरेको थियो ।
चालु बर्ष सर्भेका लागि ३० लाख रुपैया बिनियोजन भएको छ । कम्तिमा एकसय रोपनी जमिन उपलब्ध भएमा डिपिआर बनाउने योजना समेत छ । समन्वय हुन नसके यो बजेट फिर्ता हुनेछ । आरक्षकी प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरस्वती सापकोटाले भने परिषद र समितिको औपचारिक पत्र आफ्नो कार्यालयमा नआएको बताईन् । ‘मेरो कार्यालयमा पत्र आएको छैन, बिभागमा भए मलाई थाहा भएन’ सापकोटाले भनिन्, ‘अनुमति दिने काम बिभाग र मन्त्रालयबाटै हुन्छ ।’ आरक्षले समन्वय मात्र गर्ने उनले बताईन् ।
परिषदबाट खटिएका ईन्जिनियर प्रनिस ताम्राकारले ६ महिना अघिनै सर्भे गरेर मैदानका लागि उपयुक्त ठहर गरेका थिए । ‘हामीले पहिलो अध्ययनमा आवस्यक जग्गा उपलब्ध गर्न दुइ ठाउ“ छनौट गरिसकेका थियौंं’ परियारले भने, ‘छेन्टुङ र उत्तरगंगा नजिकैको स्थान मध्ये जता भएपनि मैदान बनाउन सकिन्छ ।’ ती दुवै स्थान आरक्षको सिमा भित्र भएपनि बन्यजन्तुको बासस्थानबाट टाढा पर्छ । ‘सिकार आरक्षमा बन्यजन्तु बस्ने स्थान भने छनौट भएको जग्गाबाट धेरै टाढा छ’ परियारले भने, ‘हाल झण्डै ३ सय घर, पशुपालन र हवाई मैदान रहेको स्थान भन्दा वरै हामीले जग्गा हेरेका हौं ।’ उक्त जग्गा भन्दा पश्चिमका संरचनाले अहिले सम्म बन्यजन्तुलाई असर नपरेकोले खेल मैदानले पनि असर नपर्ने उनले बताए ।
जग्गा मिलाउन सकेमा यहा“ अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको फुटबल मैदान र सुविधा सम्पन्न कवर्डहल बन्नेछ । बिभागका सूचना अधिकारी बिष्णु श्रेष्ठले समन्वयकै काम भैरहेको बताए । बन्यजन्तुहरु पालिएको स्थानमा धेरै क्रियाकलापमा रोक छ । ‘राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना बन्ने भयो भने हामीले पनि समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौ’ श्रेष्ठले भने, ‘समन्वयको काम कता पुगेको छ, अध्ययन गर्छौ ।’ आवस्यक कानून संशोधन गर्न परेपनि बिभागले सहयोग गर्छ । यहा“ बन्ने कवर्ड हलमा ‘इनडोर’ खेल संचालन हुनेछन् भने मैदानमा क्रिकेट, फुटबल र अन्य खेलको अभ्यास र राष्ट्रिय प्रतियोगता गर्न सकिन्छ ।
पा“च बर्ष अघि महाबीर पुनले पनि यो क्षेत्रको अध्ययन गरेर शितकालिन ओलम्पिकका लागि मैदान निर्माण्ँ गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेका थिए । समितिले पनि उत्तरगंगा नजिकैको एक स्थान र छेन्टुङको अर्को मैदानलाई सिफरिस गरेको हो । ‘राष्ट्रिय महत्वकै काम गर्नेहो भने सार्वजनिक जमिनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ’ पश्चिमाञ्ल खेलकु“द बिकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठले भने, ‘यो मैदान बनाउन सक्दा देशकै पहिचान बढ्नेछ ।’ ढोरपाटनमा अहिले सम्म सिकारका लागि अन्तराष्ट्रिय शिकारी आउने गर्छन् । खेल मैदान बनाइयो भने संसारभरका खेलाडी अभ्यासका लागि आउने वातावरण बन्ने उनले बताए ।
यो मैदानमा सिकारी पनि बस्दैनन् । सिकार खेल्ने ठाउ“ यहा“देखि ७ देखि १० किमी पर मात्र पर्छ । हेलिकोप्टरमा आएका सिकारी पनि जंगल क्षेत्रमा बस्छन् । यहा“को केही जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । ‘हजारौं रोपनी जमिन चरनक्षेत्रकै रुपमा भएकोले १ सय रोपनी जमिन दिनलाई कुनै समस्या नहुनुपर्ने हो’ ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले भने, ‘बिकासका लागि हाम्रा सरकारी संयन्त्रनै बाधक छन् ।’ पाटनलाई बिकास गर्न दिनैपर्ने उनले बताए । ‘स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जमिन प्रयोग गरेर केही गरौं भन्दा पनि नपाउने त ?’ नेपालीले भने, ‘ढोरपाटनमा अब दुइ सरकार भएको हो भने त्यो राम्रो भएन ।’ ढोरपाटनलाई नेपाल सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको सूचिमा पनि सूचिकृत गरेको छ । हाल आन्तरिक पर्यटक समेत बढ्न थालेकोले सहज सडक र होटल निर्माण भएमा आर्कषक खेल र पर्यटकको गन्तव्य बाटै राज्यले करोडौं आम्दानी गर्न सकिने उनले सुझाव दिए । यहा“को उत्तरगंगामा धार्मिक संरचना निर्माण र भक्तजनको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले १ करोड लगानी गरिसकेको छ । उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत निर्माण भएमा यसको महत्व अझै बढ्नेछ । जलासय बनेपनि तोकिएका स्थानमा खेलमैदान बनाउन सकिने गरी छनौट भएका हुन् ।